YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, November 16
မြန်မာကို ၂၀၁၄ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးပေးရန် အာဆီယံ ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ (ACC) တွင် ယနေ့ တရားဝင် ဆွေးနွေးလျက် ရှိပြီး ညနေပိုင်း အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးချိန်တွင် တရားဝင် ထောက်ခံမှု ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေချိန် သန့်စင်ခန်းသို့ ခေတ္တ သွားချိန်တွင် ဝန်ကြီးကို မေးမြန်းရန် ကြိုးစားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကို မေးမြန်းရန် သန့်စင်ခန်း အထွက်တွင် စောင့်နေသာ မြန်မာနှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းသမားများ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/16/20110အကြံပြုခြင်း
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅၀တန် download speed
ရတနာပုံ တယ်လီပို.ကယူထားတဲ့ ဖိုင်ဘာကွန်နက်ရှင်ပါ။ 1Mbits per second အမြန်နှုန်းပါ။
ပေးရတဲ့ လစဉ်ကြေးကတော့ တစ်လကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅၀ ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က ဒေါင်းလုပ် လုပ်နေတဲ့အမြန်နှုန်းကိုတစ်ဆိတ်မျက်လုံးပြူးပြီးကြည့် ပေးပါ။
တန်ရာတန်ကြေး ဆိုတာ ကိုယ်ကတစ်ကျပ်ပေးရင် တစ်ကျပ်တန်တာကိုပဲလိုချင်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ လျော့လည်းမရချင် ၊ပိုလည်းမလိုချင်ရပါဘူး။ အပေါ်က download speed ကိုကြည့်ပြီးတော့ တစ်လဒေါ်လာ ၅၅၀ ပေးရတာနဲ. ပြန်ရတာဘယ်လိုမှလျော်ညီမှုမရှိပါဘူး။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း နဲ. ရတနာပုံတယ်လီပို.တို. အနေနဲ. ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အသစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အစိုးရနဲ.အတူ လိုက်လျောညီထွေပြောင်းနိူင်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဆားဗစ်ပရိုက်ဗိုက်ဒါ ဒီတစ်ခုတည်းရှိတာ ၊ သုံးချင်ရင်သုံး မသုံးချင်ရင်နေ ဆိုတဲ့ အရင်လိုစိတ်ဓါတ်တွေကျန်နေမယ်ဆိုရင်တော့.....
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/16/2011 1 အကြံပြုခြင်း
ရင်ချင်းဆက် အမွှာယောက်ျားလေး ရန်ရှင်းနှင့် ရန်ကင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ရင်ချင်းဆက် အမွှာယောက်ျားလေး ရန်ရှင်းနှင့် ရန်ကင်းကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကလေးအထူးကု ဆေးရုံကြီးတွင် ယနေ့ (၁၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁) နံနက် ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ၁၀ နာရီ ၃၄ မိနစ်ထိ အချိန် ၃ နာရီကျော်ကြာ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ် ပေးနိုင်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ။
မန္တလေး မစိုးရိမ်ဟောင်းမှ မေတ္တာသုတ် သံပြိုင်ရွတ်ဆိုသံများ၊
ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာ မန္တလေး မစိုးရိမ်ဟောင်းမှာ...
မန္တလေး၊ ၈၇ လမ်း၊ ၃၆x၃၇ လမ်းကြားရှိ မန္တလေးမစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ဟောင်း သုတ္တန်ကျောင်းဆောင်ရှေ့၌ ယနေ့ (၁၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁) နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၂ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒပြုတရားပွဲမှ မေတ္တာသုတ် သံပြိုင်ရွတ်ဆိုသံများ၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအမှတ်တရ မေတ္တာစာ သံပြိုင်ရွတ်ဆိုသံများ။
Published on November 16, 2011 by webteam
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု – အပိုင်း ၃
Published on November 14, 2011 by ထက်​အောင်
မြန်မာပြည်​တောင်ဘက်​ ​မောင်းမကန်​ ကမ်းရိုးတန်းက စက်မှုတော်လှန်ရေးဟာ အန်ဒမန်​ ပင်လယ်ပြင်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်လို့ ဒါမှမဟုတ် အင်အားပြင်း​ ငလျင်တခု လှုပ်ခတ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆူနာမီ ဒီလှိုင်းကြီးအလား စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၂၅၀ ကျယ်ဝန်းတဲ့ မြေပြင်တခုလုံးကို လုံး​ ၀ပြောင်းလဲသွားစေမှာပါ။ ဒီလောက်​ အကျယ်အ၀န်းရှိတဲ့ ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့က စီးပွားရေး​ အချက်အချာ မန်ဟန်တန် (Manhattan) ထက် လေးဆလောက် ကျယ်ဝန်းပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး မတ်တဖွတ် (Map Ta Phut) စက်မှုဇုန်ထက် ဆယ်ဆလောက် ကျယ်ဝန်းပါတယ်။
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့​ ပြည်သူ​တွေအတွက် ဘာ​တွေအကျိုး​ရှိမလဲ
Published on November 16, 2011 by ပီတာအောင်
ဒီအ​ခြေအ​နေမှာ မြန်မာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်း​ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့​ပြည်သူ​တွေအတွက် ဘာ​တွေ အကျိုး​ရှိမလဲဆိုတာနဲ့​ပတ်သက်လို့​အင်ဒိုနီး​ရှား​မှာ ကျင်း​ပမယ့်​ အာဆီယံ လူထုအ​ခြေပြု အဖွဲ့​တွေရဲ့​အစည်း​အ​ဝေး​ပွဲကို တက်​ရောက်မယ့်​ Burma Partnership ​ခေါ် မြန်မာ့​အ​ရေး​ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်သူများ​အဖွဲ့​ တာဝန်ခံ ​ဒေါ်ခင်ဥမ္မာကို ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ထား​ပါတယ်။
နောက်​ကြောင်း​ပြန်ကြည့်​မယ်ဆိုရင် ၂၀၀၆ တုန်း​ကဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ချိုး​ဖောက်မှု​တွေရှိ​နေတယ်။ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်လည်း​ လွတ်မလာ​သေး​ဘူး​ပေါ့​။ ဒီမိုက​ရေစီ​ရေး​ ပြုပြင်​ပြောင်း​လဲမှု​တွေလည်း​ မ​တွေ့​သေး​တဲ့​အ​ပေါ်မှာ အဲဒီတုန်း​က လာအိုနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်း​က ဆုံး​ဖြတ်ခဲ့​တာ​ပေါ့​နော်။ ၂၀၀၆ မှာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌမယူဖို့​၊​ ဆိုင်း​ငံ့​ထား​ဖို့​ ဆိုပြီး​တော့​ ဆုံး​ဖြတ်ခဲ့​တာ။ အခုအချိန်မှာကျ​တော့​ အဲဒီတုန်း​က လိုအပ်ချက်​တွေက ပြည့်​မီလို့​ အာဆီယံ ​ခေါင်း​ဆောင်​တွေအ​နေနဲ့​ ဒီလို တာဝန်​ပေး​လိုက်တာလို့​ ထင်လား​။ ဘာ​ကြောင့်​ မြန်မာကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ​ပေး​ဖို့​ ဆုံး​ဖြတ်ဖို့​ ဖြစ်လာတယ်လို့​ ထင်လဲ။
“ကျမမြင်တာက​တော့​ အရင်တ​ခေါက်တုန်း​က မ​ပေး​နိုင်တဲ့​အ​နေအထား​မျိုး​မှာ မပြည့်​စုံ​သေး​တဲ့​ အချက်​တွေက အခုပြည့်​စုံသွား​လို့​ ​ပေး​ဖို့​စဉ်း​စား​တယ်ဆိုတာမျိုး​ လို့​တော့​ ကျမထင်ဘူး​။ အရင်တုန်း​က အ​ခြေအ​နေဲ့​ အခုအ​ခြေအ​နေမှာ အ​ပေါ်ယံကြည့်​ရင် အမြင်မှာ ​ပြောင်း​လဲတဲ့​ဟာ​တွေ​တော့​ ရှိတာ​ပေါ့​။ ဥပမာ နိုင်ငံရဲ့​ နံပါတ်တစ်​ခေါင်း​ဆောင် ဗိုလ်ချုပ်သန်း​ရွှေ ရှိတဲ့​အ​ခြေအ​နေမျိုး​က​နေ အခုက​တော့​ စစ်ဗိုလ်ချုပ်မဟုတ်​တော့​ဘဲနဲ့​ အရပ်သား​ ဖြစ်သွား​တယ် ဆိုတဲ့​ဥစ္စာမျိုး​နဲ့​ ဗိုလ်ချုပ်သိန်း​စိန်က အရပ်သား​ ဝတ်စုံ​ပြောင်း​လိုက်တဲ့​ကိစ္စလို၊​ တစုံတရာ သတင်း​မီဒီယာကို လွတ်လပ်ခွင့်​ ​ပေး​လာတဲ့​ဟာမျိုး​တို့​ စသည်ဖြင့်​ ဒီလိုကိစ္စမျိုး​တွေကို ကြည့်​လိုက်ပြီး​တော့​ သူတို့​က အရင်တ​ခေါက်က ထက်စာရင်​တော့​ နည်း​နည်း​တော့​ သာပါတယ် ဆိုတာမျိုး​တော့​ တွက်နိုင်တာ​ပေါ့​။ သို့​သော်လည်း​ပဲ နိုင်ငံတခုမှာ အ​ခြေခံအကျဆုံး​ တည်ငြိမ်မှု ရှိခြင်း​မရှိခြင်း​၊​ ငြိမ်း​ချမ်း​မှု ရှိခြင်း​ မရှိခြင်း​၊​ တိုင်း​ပြည်ရဲ့​ နိုင်ငံ​ရေး​အ​ခြေအ​နေ တည်ငြိမ်မှု ဘယ်​လောက်ရှိလဲ ဆိုတဲ့​ဟာကို ကြည့်​ရင်​တော့​ ကျမ မြင်တာက ၂၀၀၆ နဲ့​ အခုကြား​ထဲမှာ ဘာမှ သိသိသာသာ ထူး​ထူး​ခြား​ခြား​ ကွာဟချက်ကို မ​တွေ့​ရဘူး​ ဖြစ်တယ်​လေ။”
“ကျမမြင်တာက​တော့​ တကယ်တမ်း​ ၂၀၁၄ မှာ ဒီ ဥက္ကဋ္ဌရသွား​ပြီဆိုရင်လည်း​ ကျမတို့​ ပြည်သူ​တွေအ​နေနဲ့​က အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရခြင်း​ရဲ့​ အထူး​အခွင့်​အ​ရေး​ ဘယ်သူက ခံစား​ရမလဲ ဆိုရင်​တော့​ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်း​စား​လို့​ပဲ ကျမ မြင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း​က ကျမတို့​ ပြည်သူ​တွေရဲ့​ အကျိုး​ခံစား​ခွင့်​ ဆိုတာက အုပ်ချုပ်သူက ပြည်သူရဲ့​ အကျိုး​အတွက်ကို လုပ်​ပေး​မှပဲ အဲဒီအကျိုး​ကရမှာကိုး​။ ဆို​တော့​ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လိုက်ခြင်း​အတွက်​ကြောင့်​မို့​လို့​ တကယ်တမ်း​ ရမယ့်​အကျိုး​ကို ကြည့်​လိုက်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာက​နေပြီး​တော့​မှ အစိုး​ရ​တွေ လာကြမယ်၊​ ​နေပြည်​တော်မှာ အစည်း​အ​ဝေး​တွေ လုပ်ကြမယ်ဆို ဒါ​တွေက​တော့​ အစိုး​ရချင်း​ ဆက်ဆံ​ရေး​ ဆိုတာက​တော့​ ဖြစ်မှာ​ပေါ့​။ အဲဒီ​နေရာမှာ နိုင်ငံအတွက်​ရော တစုံတရာ ဂုဏ်မရှိဘူး​လား​လို့​ ဆို​တော့​ ကိုယ့်​နိုင်ငံက တကယ်တမ်း​ ​ဒေသရဲ့​ ဥက္ကဋ္ဌ​ခေါင်း​ဆောင်​နေရာမျိုး​ကို ယူခွင့်​ရတယ် ဆိုလို့​ရှိရင် ဒါ ကိုယ့်​နိုင်ငံ ပြည်သူပြည်သား​တွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ တခုလို့​တော့​ ကျမတို့​ မြင်ကြည့်​လို့​ ရတာ​ပေါ့​။ ဒါ​ပေမယ့်​ အဲဒီလိုမျိုး​ ဂုဏ်ယူနိုင်ဖို့​ ကိုယ့်​ပြည်သူပြည်သား​တွေက ဂုဏ်ယူနိုင်ဖို့​ ​ခေါင်း​ထောင်နိုင်ရဲ့​လား​၊​ ​ခေါင်း​မော့​နိုင်ရဲ့​လား​ ဆိုတာက​တော့​ ခုနက အုပ်ချုပ်သူက ပြည်သူကို ဘယ်လိုမျိုး​ ​ခေါင်း​မော့​နိုင်​အောင် လုပ်​ပေး​လဲ။ သူတို့​ရဲ့​ တကယ်တမ်း​တွေ့​နေတဲ့​ လက်ရှိပြဿနာ​တွေကို ဘယ်​လောက်အထိ ​ဖြေရှင်း​ပေး​သလဲဆိုတဲ့​ အ​ပေါ်မှာ မူတည်တယ်။”
နောက်ဆုံး​အ​နေနဲ့​ မြန်မာနိုင်ငံက လူထုအ​ခြေပြုအဖွဲ့​အစည်း​တွေရဲ့​ အခန်း​ကဏ္ဍ​ရော လာမယ့်​ အာဆီယံထိပ်သီး​အစည်း​အ​ဝေး​ပွဲမှာ ဘယ်​လောက်အထိ ထင်ဟပ်မှု ရှိမလဲ​ပေါ့​နော်။ သူတို့​ ဘယ်​လောက်အထိ ပါဝင်ခွင့်​ ရှိမလဲ။
လူပါးက ဝလွန်းလာလို့ နည်းနည်းတော့ ပြောလိုက်ဦးမယ်။
ဦးဂမ္ဘီရ နှင့် အခြားနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတို့ကို သယ်ဆောင်လာသည့် လုံခြုံရေး ယာဉ်တန်း
ဦးဂမ္ဘီရ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအချို့ အင်းစိန်ထောင်သို့ ခေါ်ဆောင်
by Yangon PressInternational on Wednesday, November 16, 2011 at 2:00pm
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၁ (YPI)
လေယာဉ်ဖြင့် ကလေးထောင်နှင့် ကျောက်ဖြူထောင်များမှ ခေါ်ဆောင်လာသည့် ထောင်ပြောင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ယနေ့ညနေ ၆ နာရီ ၃၈ မိနစ်တွင် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ တဆင့် အင်းစိန်ထောင်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ခေါ်ဆောင်လာသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအနက် ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေး အခင်း ဦးဆောင်သူ ဦးဂမ္ဘီရ ၊ ဂွမြို့နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီပု၊ ကျောက်ဖြူထောင်မှ ကိုသူရိန်အောင် တို့ပါဝင်သည်ကို အတည်ပြုနိုင်သော်လည်း အခြား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ပါရှိသည် မပါရှိသည်ကိုမူ အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။
ဦးဂမ္ဘီရ နှင့် အခြားနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတို့ကို သယ်ဆောင်လာသည့် လုံခြုံရေး ယာဉ်တန်း မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ အင်းစိန်ထောင်သို့ ထွက်ခွာစဉ် (ဓါတ်ပုံ -YPI)
ဦးဂမ္ဘီရအား ကလေးမြို့ထောင်မှ ရွှေ့ပြောင်းမည်ဆိုသည့် သတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ၎င်း၏ မယ်တော် ဒေါ်ရေးက ကလေးမြို့ လေဆိပ်တွင်သွားရောက် စောင့်ဆိုင်းသော်လည်း ၀င်ခွင့်မရပဲ လုံခြုံရေး တင်းကြပ်စွာဖြင့် မွန်းလွဲ ၄ နာရီဝန်းကျင်တွင် လေယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ရေးက “ မတွေ့ လိုက်ရဘူး၊ လေဆိပ်ထဲ ၀င်ခွင့်မပေးဘူး၊ လှမ်းလည်းမမြင်လိုက်ရဘူး၊ သူ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ ကားတစီးနဲ့ သယ်လာတာသိလိုက်တယ်” ဟုပြောသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လေယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်လာမည့် သတင်းကြောင့် ရန်ကုန်မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်၌ သတင်းထောက်များနှင့် မိတ်ဆွေ ရဲဘောရဲဘက်များ သွားရောက်စောင့်ဆိုင်းနေကြသော်လည်း ပြောင်းရွှေ့လာသူများအား ရဲ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်စွာဖြင့် ညနေ ၆ နာရီခွဲသာသာတွင် ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသာ မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။
ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်သို့ ခေါ်ဆောင်လာသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား အင်းစိန်တွင်ပင် ထားရှိမည် သို့မဟုတ် အခြားနယ်ထောင် တခုသို့ပို့ဆောင်မည်ဆိုသည်ကို အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။ ကျိုင်းတုံထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုမူ သရက်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ရှိပြီးမနက်ဖြန်တွင် ကျိုင်းတုံထောင်မှ ခေါ်ဆောင်လာမည်ဟု ယူဆကြောင်း မိသားစုဝင်များကပြောသည်။
ယနေ့ စတင်လိုက်သည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ထောင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွင် သရက်ထောင်မှ မနီလာသိန်း (သာယာဝတီထောင် သို့) ၊ ပူတာအိုထောင်မှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦး (တောင်ငူထောင်သို့) တို့ပါဝင်သည်ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ က အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ပြန်ကြားရေး ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း ဘန်ကောက်မြို့၌ ဗွီအိုအေ မြန်မာဋ္ဌာနနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် နယ်ဝေးရောက်နေသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား မိသားစုနှင့် နီးရာ အကျဉ်းထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုလို ထောင်ပြောင်းရွှေ့မှု ပြုလုပ်ချိန်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းတွင် အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံ ကျင်းပချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၆၀၀ ကျော် ရှိနေသေးသည်ဟု ထိုင်းအခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသလို၊ အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကမူ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့ လွှတ်ပေးပြီးနောက် ၃၀၀ ၀န်းကျင်သာရှိတော့သည်ဟု ယင်းအဖွဲ့၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ သီးခြားကောက်ယူထားသည့် စာရင်းအရမူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅၉၀ ကျော်သာရှိသည်ဟု ယခုပတ် တနင်္လာနေ့ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ။
By featured, ရန်ပိုင် on November 16, 2011 6:22 pm
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့က အကျဉ်းသားများလွှတ်မည်ဆို၍ အင်းစိန်ထောင် ရှေ့တွင် လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် မိသားစုဝင်များ(ဓာတ်ပုံ - AP)
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကလေးထောင်တွင်
ထောင်ဒဏ် ၆၃ နှစ် ကျခံနေရသည့် အရှင်ဂမ္ဘီရကို အာဏာပိုင်များမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေတွင် အင်းစိန်ထောင်သို့
ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ရေးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ အန်တီသေချာတာက လေဆိပ်ခရီးသည် စာရင်းမှာ အန်တီ့သား ဦးညီညီလွင်တဲ့။ ဦးညီညီလွင်ဆိုတာ အရှင်ဂမ္ဘီရ
လေ။ လေယာဉ်ခရီးသည် စာရင်းကတော့ ဒေသခံတွေ ကူညီမှုပါ။” ဟု ဒေါ်ရေးက ပြောသည်။
သို့သော် လေဆိပ်အတွင်းတွင် ထောင်ဝန်ထမ်းများ ပစ္စည်းသယ်ယူနေသည်ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဒေါ်ရေးက
ဗုဒ္ဓဟူး, 16 နိုဝင်ဘာ 2011
မြန်မာနိုင်ငံထဲက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ကို ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ထောင်တွေကနေ မိသားစုနဲ့ နီးရာ ဒေသတွေမှာ ရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေကို စတင် ပြောင်းရွေ့ နေပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူ အကျဉ်းဦးစီးဌာနက တာဝန်ရှိသူ တချို့လည်း နို်င်ငံရေးအကျဉ်းသားများထောင်ပြောင်းတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောပြ ထားပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
သရက်ထောင်မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ၈၈ မျိူးဆက်ကျောင်းသူမနီလာသိန်းကို မိသားစုနဲ့ နီးတဲ့ သာယာဝတီထောင်ကို ဒီကနေ့ ရွေ့လိုက်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက မိသားစုဆီကို တရားဝင် အကြောင်းကြားတာ မဟုတ်ပေမယ့် ထောင်ပြောင်း ထောင်ရွေ့တွေ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ စုံစမ်း မေးမြန်းရာကနေ မနီလာသိန်းဟာ ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ နာရီက သာယာဝတီထောင်ကို ရောက်နေပြီလို့ မနီလာသိန်းရဲ့ ခင်ပွန်း ဖြစ်တဲ့ ကိုဂျင်မီခေါ် ကိုကျော်မင်းယုရဲ့အကို ကိုမျိုးမင်းယုက ပြောပါတယ်။
"လောလောဆယ်တော့ ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး တယောက်ထဲကိုပဲ ရွေ့တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဒီနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်လောက်မှာ ပူတာအို လေယာဉ်ကွင်းကနေ လှမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ကျနော့်ကို လှမ်း ဆက်တာပေါ့နော်။ ပူတာအိုထောင်ကနေ ခေါ်ထုတ်လာတာတော့ ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး တယောက်ထဲဘဲ။ မနက်ကတည်းက လေယာဉ်ကွင်းကို ရောက်နေတယ်။ တစ်နာရီ ၃၅ မိနစ်လောက်မှာ လေယာဉ်ပေါ် ပါသွားတယ်။ ကြားသိရတဲ့ သတင်းအရ ဆိုရင်တော့ တောင်ငူထောင်ကို ပြောင်းပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။
တခါ ကလေးထောင်မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ အရှင် ဂမ္ဘီရနဲ့ ဂွမြို့နယ် NLD ပါတီအမတ် ဦးညီပုတို့ ၂ ဦးကိုတော့ ဒီကနေ့ ကလေးကနေ ရန်ကုန်ကိုသွားတဲ့ လေယာဉ် ခရီးသည် စာရင်းမှာ တွေ့ရတယ်လို့ ကလေးမြို့ကို ရောက်နေတဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရရဲ့ မိခင် ဒေါ်ရေးက ပြောပါတယ်။ အရှင်ဂမ္ဘီရနဲ့ ဦးညီပုတို့ ၂ ဦးကို ကလေးကနေ အင်းစိန်ထောင်ကို ရွေ့မယ်လို့ သိရပြီးတော့ မနက်ဖြန်မှာ အင်းစိန်ထောင်မှာ သွားပြီးတော့ စုံစမ်းမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အထက်အရာရှိတွေရဲ့ ညွန်ကြားချက် တစုံတရာ မသိရသေးပေမယ့် ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးမှုတွေနဲ့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ကိုမျိူးဟန်၊ ကိုညီညီဇော်၊ မောင်သိန်းဇော်တို့ ၄ ဦးရဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေကို အထက် အရာရှိတွေဆီကို ပေးရပြီးတော့ ကိုမင်းကိုနိုင်ထောင်ထဲမှာ ဆွဲတဲ့ ပန်းချီကားတွေကိုလည်း သိမ်းဆည်း ထုတ်ပိုးတာတွေ လုပ်နေတာရှိတယ်လို့ ကျိုင်းတုံထောင် အရာရှိတဦးက VOA မြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက အကျဉ်းသားတွေကို မိသားစုနဲ့နီးတဲ့ ထောင်တွေဆီကို ရွေ့ပြောင်း ပေးဖို့အတွက် စီစဉ်နေတယ်လို့ ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်းနဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံခန်းမှာ ပြောခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကလည်း ဝေးလံ ခေါင်သီလှတဲ့ နေရာတွေကနေ မြို့ပြ ထောင်တွေဆီကို ရွေ့ပြောင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့စာ ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလိုမျိုး ထောင်အပြောင်းအရွေ့တွေ စပြီးတော့ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အချို့ထောင်ပြောင်းရွှေ့
မိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန်။ နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၁
ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများဖြစ်သည့် မင်းကိုနိုင် ၊ အရှင်ဂမ္ဘီရ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး အစရှိသူတို့ကို နယ်ဝေး အကျဉ်းထောင်များမှ မိသားစုနှင့် နီးသည့် ရန်ကုန် နှင့်အခြားမြို့များသို့ ပြောင်းရွှေ့လျှက်ရှိသည်ကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စတင်ကြားသိရသည်။
ပူတာအိုထောင်မှ အက်စ်အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးကို တောင်ငူထောင်သို့၎င်း၊ ကလေး အကျဉ်းထောင်မှ အရှင်ဂမ္ဘီရကို ရန်ကုန်အကျဉ်းထောင်သို့၎င်း၊ သရက်ထောင်မှ မနီလာသိန်းကို သာယာဝတီထောင်သို့၎င်း၊ ကျောက်ဖြူ အကျဉ်းထောင်မှ ကိုသူရိန်အောင်အား ရန်ကုန်သို့၎င်း အသီးသီး ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်ဟု ယနေ့ညနေ ၀င်လာသည့် သတင်းများအရ သိရသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို သရက်သို့ရွှေ့မည်ဆိုသည့် သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။ ယနေ့ညနေပိုင်းအထိ ကျိုင်းတုံအကျဉ်းထောင်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ကာ ရွှေ့ပြောင်းရန် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။
ကလေးအကျဉ်းထောင်မှ ရန်ကုန်အင်းစိန်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလာသည့် အရှင်ဂမ္ဘီရကို သူ့မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ရေးက ကလေးမြို့ လေဆိပ်တွင် သွားရောက်စောင့်ဆိုင်းသော်လည်း တွေ့ခွင့်မရခဲ့ ဟု မိခင်ဒေါ်ရေးက ပြောသည်။
“ အမေ့က လေဆိပ်မှာ တွေ့ရမလားလို့ သွားစောင့်တာ ၊ သူ့ပစ္စည်းတွေသယ်လာတဲ့ ကားတော့ တွေ့တယ်။ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေ အပြောအရလည်း သူပါတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် လေဆိပ်ထဲ ၀င်ခွင့်မရပဲ ဂိတ်ဝမှာစောင့်နေတာ ၊ ပစ္စည်းသယ်လာတဲ့ကားပဲတွေ့ရတယ်။ ဦးဇင်းကိုတော့ တခြား ၀င်ပေါက်ကနေ ခေါ်သွားတယ်ထင်တယ်။ တိတ်တိတ်ပုန်းလေး ခေါ်သွားတာပေါ့” ဟုပြောသည်။
အရှင်ဂမ္ဘီရနှင့် စစ်တွေထောင်မှ ခေါ်ဆောင်လာသည့် အခြားနိုင်ငံရေး အကျဉ်း ၂ ဦး ၃ ဦးကို မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ ညနေ ၆နာရီခွဲတွင် ရဲလုံခြုံရေး၊ စရဖတို့ ခြံရံလျှက် အများမမြင်တွေ့စေရန် ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု သွားရောက်စောင့်ဆိုင်းနေသူ သတင်းထောက်က ပြောသည်။
“ တီတူးသောင်ဇင်တစီးနဲ့ တောင်းအေ့စ် တစီးနှစ်စီးနဲ့ ကားထဲက ခေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ရဲတွေက ကိုယ်နဲ့ကွယ်ပြီး ကားအမြန်မောင်းသွားတာ၊ အင်းစိန်ကို လိုက်တော့လည်း မမှီတော့ဘူး ဘယ်သူမှ မတွေ့လိုက်ရဘူး ” ဟု ၎င်းသတင်းထောက် ကပြောသည်။
အရှင်ဂမ္ဘီရအား အင်းစိန်ထောင်တွင် ထားရှိမည် သို့မဟုတ် ခရီးတထောက်နားရန် ခေတ္တထားရှိခြင်းဖြစ်သည် ဆိုသည့်အချက်တို့ကို အတည်မပြုနိုင်သေးပေ။ အရှင်ဂမ္ဘီရ နှင့်အတူ ကလေးထောင်မှ ဂွမြို့ လွှတ်တော် အမတ် ဦးညီပုလည်း ပါလာသည်ဟု ရဲသတင်းရပ်ကွက်မှ သိရှိရသည်။
ယခင်သီတင်းပတ် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးက ဗွီအိုအေ သတင်းဋ္ဌာနနှင့်တွေ့ဆုံခန်းတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ဝေးလံသည့် အကျဉ်းထောင်များမှ မိသားစုနှင့် နီးရာ အကျဉ်းထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဟု ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း၌ အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံ ကျင်းပနေပြီး လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအား အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ရေးကိစ္စ ဆုံးဖြတ်နေချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား မိသားစုနှင့် နီးရာ အကျဉ်းထောင်များသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
နို်င်ငံတကာအစိုးရနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုလျက်ရှိသော်လည်း ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ယခုနှစ်မေလနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် အနည်းငယ်စီသာ လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
အသျှင် ဂမ္ဘီရ နှင့် ဦးမင်းကိုနိုင် တို့ကို ဖိနှိပ်မှု ပိုပြင်းထန် သည့် အကျဉ်းထာင်များ သို့ ပြောင်းရွှေ့ 
by FNG on November 16, 2011
တင်ကျော်ကျော်စိုး၊ ၊ယနေ့ နံနက် အစောပိုင်းတွင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား
ခေါင်းဆောင် အများစု နှင့် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး တွင် ဦးဆောင် ခဲ့ သည့် သံဃာ့
တပ်ပေါင်းစု မှ ခေါင်းဆောင် ဆရာတော် ကို ဖိနှိပ်မှုပိုများပြားပြင်ထန် သည့် အကျဉ်းထောင်
များသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေရာချထားလိုက်သည် ဟု FNG မှသတင်းရရှိသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင် ကို ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံထောင် မှ
သရက်ထောင် ကို ဒီနေ့ပြောင်းရွှေ့ လိုက်ပြီး ကလေးထောင် မှာ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ကျခံ
နေရပြီး ကျမ္မာရေး မကောင်းတဲ့ အသျှင် ဂမ္ဘီရ ကို တော့ ဧရာဝတီ တိုင်း မြောင်းမြ အကျဉ်း
ထောင် ကို ပို့ဆောင် လိုက်သည် ဟု သိရသည်။
မြောင်းမြ အကျဉ်းဟောင် ယခင် က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အနည်းစု သာရှိ ပြီး အခြား အကျဉ်း
ထောင်များ ထက် ပိုပြီး ဖိနှိပ်မှု နည်းသော် လည်း ၂၀၀၃ ခုနှစ် ထောင်တွင်း အုံကြွမှု နောက်ပိုင်း
သာယာဝတီ၊သရက်၊မြင်းခြံ၊ မန္တလေး ကဲ့ သို့ဖိနှိပ် မှု များ သည့် ထောင် ဖြစ်လာခဲ့ သည်။
ရှမ်းအမျိူးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် SNLD မှ ဦးခွန်ထွန်း ဦး ကို ပူတာအို ထောင် မှာ တောင်ငူ
ထောင် သို့ယနေ့ ပြောင်းရွှေ့ လိုက်သည်။ တောင်ငူ ထောင် မှ ထောင် ၀န်ထမ်းများ မှာ ပြီး ခဲ့
သည့် လက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသာစု များ ထောင်ဝင်စာ တွေ့ ရာတွင် စိတ် အနှောင့်
ဖြစ်စေရန် ဖန်တီးမှုများ ရှိ ခဲ့သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ မနီလာသိန်း ကို သရက်ထောင်
မှ သာယာဝတီ ထောင် သို့ ပြောင်းရွှေ့ လိုက်သည် ဟု သူမ၏ ဆွေမျိုးတစ်ဦး က ပြောသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် သင်္ကြန် ဗုံးကွဲ မှု တွင် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူခြင်း ပြု ခဲ့ သည့် သတင်းထောင် စည်သူဇေ
ယျ ကို မူ အင်းစိန် မှ နေ၍ ပိုပြီး ဝေး သော ဟင်္သတ ထောင် သို့ ပို့ ဆောင် ထား လိုက်သည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များ ထောင် ပြောင်းရွှေ့ မှု နှင့် ပတ်သက် ပြီး ကိုစည်သူ ဇေယျ ၏ မိ
သားစု ၀င် တစ်ဦး က ” ပိုပြီး ညှင်းပန်း နှိပ် စက် သလို ပဲ ၊ ထောင် ပြောင်းတော့ ပစ္စည်း တွေ
ဘာမှ မယူလာခဲ့ ရ ဘူး ၊ ကိုမင်းကို နိုင် ဆိုရင် ကျိုင်းတုံ မှာ အေးတော့ အနွေးထည် တွေ ၀တ်
ရတယ် လေ အင်းစိန် ရောက် တော့ ထောင် ဥပဒေ ဆို ပြီး အကုန် သိမ်း တော့ တာ ပဲ၊ အစိုးရ
က နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသား တွေ ကို စိတ်ဝေဒနာ ရအောင် ပို နှိပ် စက်သလို နေပဲ ၊ သူ တို့ ကို
ကယ်မယ့် လူ မရှိ တော့ ပါဘူး ၊ NLD နဲ့ကမ္ဘာ့ အစိုးရ တွေ လည်း အလကား ပါပဲ သူ တို့ 
အကျိုး အတွက် လုပ် နေကြတာ ဟု သူမ၏ ရင်တွင်း ခံ စား ချက် ကို ရိုးသား စွာဖွင့် ဟသည်။
မနက်ဖြန် တွင် နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသား အချို့ကို ထပ်မံ ပြောင်းရွှေ့ မှု ပြု နိုင် သည်ဟု
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစု များ က ခန့် မှန်းကြ သည်။
နအဖ စစ်အစိုးရ ၏ နိုင်ငံ တ၀ှမ်းရှိ အကျဉ်းထောင် များ အတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား
နှစ်ထောင် နီးပါး ရှိ သည်။စစ်အစိုးရ ၏ ဆိုးရွား လှသော အကျဉ်းထောင် များ အတွင်း နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသား အချို့ မှာ ကျမ္မာရေးချို့ယွင်းလျှက်ရှိသည်။
Published on November 16, 2011 by မင်းလွင်
ယုံကြည်ချက်​ကြောင့်​ နှစ်ရှည်​ထောင်ဒဏ် အကျဉ်း​ကျခံ​နေရတဲ့​ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​တွေကို ဒီက​နေ့​မှာ နယ်အ​ဝေး​ထောင်က​နေ မိသား​စုနဲ့​နီး​တဲ့​ ​ထောင်ကို ​ပြောင်း​ရွှေ့​ခဲ့​တယ်လို့​ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ မိသား​စုဝင်​တွေက ​ပြောပါတယ်။
ပူတာအို​ထောင်မှာ ၉၃ နှစ်ကြာ ​ထောင်သွင်း​အကျဉ်း​ချခံ​နေရတဲ့​ ရှမ်း​ခေါင်း​ဆောင် ဦး​ခွန်ထွန်း​ဦး​ကို ​ထောင်အာဏာပိုင်​တွေက ​တောင်ငူ​ထောင်ကို ​ရွှေ့​ပြောင်း​လိုက်တယ်လို့​ သူ့​ပါတီဖြစ်တဲ့​ ရှမ်း​တိုင်း​ရင်း​သား​များ​ ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် SNLD က အတည်ပြု​ပြောပါတယ်။
ဦး​ခွန်ထွန်း​ဦး​ဟာ ဒီက​နေ့​ ​နေ့​လယ် တနာရီခွဲမှာ ပူတာအို​လေဆိပ်က​နေ မြစ်ကြီး​နား​ ​လေဆိပ်ကိုအသွား​မှာ မျက်မြင်သက်​သေကို ကိုး​ကား​ပြီး​ ပါတီရဲ့​ ​ပြော​ရေး​ဆိုခွင့်​ရှိသူ ဦး​စိုင်း​လိတ်က ​ပြောပါတယ်။
ရှမ်း​တိုင်း​ရင်း​သား​များ​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်က ဦး​စိုင်း​လိတ်က​တော့​ အစိုး​ရဘက်က​နေ အစိုး​ရိမ်မကြီး​ဘဲ အခုလို ​ထောင်​ပြောင်း​ရွှေ့​တာ​တွေ လုပ်မယ့်​အစား​ ခြွင်း​ချက်မရှိ ချက်ချင်း​ လွှတ်သင့်​တယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
“ဒီအချိန်ထိ​တော့​ ဒီသတင်း​ကို လျှို့​ဝှက်ထား​သေး​တယ်လို့​ ​ပြောလို့​ရတာ​ပေါ့​။ ဒီအချိန်ထိက​တော့​ ရှိ​နေ​သေး​တယ်။ အဲဒီသတင်း​က အမှန်ဖြစ်ဖို့​များ​လောက်တယ်လို့​ ခန့်​မှန်း​ရတာ​ပေါ့​လေ။ ဘာလို့​လဲဆို​တော့​ ဒီ​နေ့​ဆိုလို့​ရှိရင် ကျ​နော်တို့​ ကိုမင်း​ကိုနိုင်နဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ ကျ​နော်တို့​ ဒီကျိုင်း​တုံ​ထောင်ကို ​ရောက်ပြီး​ ​ပေါ့​နော် ကျန်း​မာ​ရေး​စောင့်​ရှောက်မှု စာရင်း​ဇယား​စစ်တမ်း​တွေ အား​လုံး​ ပြင်ဆင်​နေတာ​တော့​ ​တွေ့​ရတယ်​ပေါ့​နော်။ ကျိုင်း​တုံ​လေယာဉ်က ဘယ်​နေ့​တွေရှိလဲ ဆိုရင် တနင်္ဂ​နွေ၊​ အင်္ဂါ၊​ ကြာသပ​တေး​၊​ စ​နေ မနက်ဖြန်ဆိုရင်​တော့​ ကွန်ဖန်း​ ဖြစ်​လောက်ပါတယ်။”
သရက်အကျဉ်း​ထောင်မှာ အကျဉ်း​ကျခံ​နေတဲ့​ ၈၈ မျိုး​ဆက် ​ကျောင်း​သား​များ​အဖွဲ့​က မနီလာသိန်း​ကိုလည်း​ ဒီက​နေ့​ သယာဝတီအကျဉ်း​ထောင်ကို ​ပြောင်း​ရွှေ့​လိုက်တယ်လို့​ မိသား​စုဝင်​တွေက သယာဝတီ ​ထောင်အာဏာပိုင်​တွေကို ကိုး​ကား​ပြီး​ ဒီဗွီဘီကို​ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​တွေ အာဆီယံ အစည်း​အ​ဝေး​ပြီး​မှလည်း​ လွှတ်နိုင်မယ်လို့​ ၈၈ မျိုး​ဆက်​ကျောင်း​သား​များ​အဖွဲ့​က ကိုပြုံး​ချိုရဲ့​ ဖခင် ဦး​ဝင်း​မောင်က ​ပြောဆိုတယ်။
“သတင်း​တော့​ထွက်လာတယ်၊​ ဘာမှ ထိထိ​ရောက်​ရောက် မကြား​ရ​သေး​ဘူး​လေ။ ဘာလို့​လဲဆို​တော့​ သူတို့​က အစီရင်ခံစာ တင်ပြတာပဲ​ပြောတယ်၊​ ဘာမှ အမိန့်​ထွက်မလာဘူး​လေ။ ​နောက်ထပ် သိရတာက​တော့​ သူတို့​ ညှိလို့​ မရ​သေး​ဘူး​လို့​ ကြား​နေတယ်။ အဲဒီ​တော့​ အာဆီယံ ပြန်လာပြီး​မှပဲ အထ​မြောက်မလား​မသိဘူး​။ တသုတ်တည်း​ မလွှတ်ဘဲနဲ့​ ခွဲလွှတ်မယ်လို့​လည်း​ ကြား​နေတယ်။ လွှတ်ဖို့​တော့​ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့​ ကြား​တယ်။”
စစ်ကိုင်း​တိုင်း​ဒေသကြီး​ က​လေး​အကျဉ်း​ထောင်က​နေ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ နှစ်ဦး​ကိုလည်း​ ဒီက​နေ့​မှာ က​လေး​အကျဉ်း​ထောင်က​နေ ​ပြောင်း​ရွှေ့​သွား​တယ်လို့​ အဲဒီအကျဉ်း​ထောင်နဲ့​ နီး​စပ်တဲ့​ အသိုင်း​အဝိုင်း​က ​ပြောပါတယ်။
လယ်သမားဆန္ဒပြမှု ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူ ထိန်းသိမ်းခံရ
By featured, ခင်ဦးသာ on November 16, 2011 4:30 pm
ဧရာဝတီတိုင်း ငွေဆောင်ကမ်းခြေရှိ လယ်သမား၊ အလုပ်သမားတို့အတွက် အကျိုးဆောင်ပေးနေသည့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ကြည့်သူများ ကွန်ရက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်နိုင်သည် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုဖြင့် တနင်္လာနေ့တွင် ထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရသည်။
သူ၏အမှုသည် ထိုဒေသရှိလယ်မြေများ သိမ်းယူခံရခြင်းကို မကျေနပ်သော လယ်သမား ၂၀၀ ၀န်းကျင်က စက်တင်ဘာလအတွင်း ဆန္ဒပြခဲ့မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု သိရသည်။
“မကြာခင်ကပဲ ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကို ချီတက်ပြီးတော့ သိမ်းထားတဲ့လယ်မြေတွေပြန် ရရှိရေး တောင်းဆိုခဲ့တာကို ဗီဒီယိုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်တယ်၊ သိမ်းဆည်းထားတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးထားတာပါ” ဟု ကိုမြင့်နိုင်၏ ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက ပြောသည်။
ဤအတောအတွင်း ပုသိမ်ခရိုင်၊ မြက်တိုမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ကိုမြင့်နိုင်သည် ဗီဒီယို အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ (က)၊ (ခ)တို့ဖြင့် အရေးယူခံနေရပြီး နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၌ တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်ရမည်ဟု ကိုဖိုးဖြူက ရှင်းပြသည်။
ကိုမြင့်နိုင်အား ဖမ်းဆီးခြင်းသည် အာဏာပိုင်တို့က ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေး လုပ်ဆောင်နေသူများကို နှောင့်ယှက်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ကိုဖိုးဖြူက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ပြောသည်။
“အခုစွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေဟာ အရင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်သူတွေကို ဖမ်းဆီး နှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မတွေပါ၊ အခုအစိုးရဟာလည်းပဲ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို ရပ်တန့်သွားအောင် တားဆီး ကန့်သတ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေတုန်းပဲလို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ကိုဖိုးဖြူက ဆိုသည်။
ကိုမြင့်နိုင်အား ဖမ်းဆီးအရေးယူထားသော်လည်း သူ ဗီဒီယိုရိုက်ကူး မှတ်တမ်းတင်သော ဆန္ဒပြမှုတွင် ပါဝင်သည့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ လယ်သမားများ ထိန်းသိမ်းခံရခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မှ လယ်သမားတချို့ကလည်း မကြာသေးမီက အလားတူ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသေးသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ် မြို့နယ် ၃ ခုမှ လယ်သမား ၅၀ ၀န်းကျင်သည် သိမ်းဆည်းခံထားရသော လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး၊ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ တချို့ ဖျက်သိမ်းပေးရေးတို့အတွက် ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ထိုစဉ်က ဆန္ဒပြသည့် ၇ ဦးသည် ဥပဒေမဲ့ လူစုလူဝေး ပြုလုပ်မှု၊ အမိန့်ဖီဆန်မှု တို့ဖြင့် တရားစွဲခံရပြီး နောက်တနေ့တွင် အာမခံဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်သွားသည်။
သဲသဲ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၄ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ စပါးဈေးကျသည့်အတွက် တောင်သူများ အရှုံးမပေါ်စေရန် နိုင်ငံတော်မှ အရန်ဆန် တန်ချိန် တသန်းကို အာမခံဈေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူမည့် အစီအစဉ်မှာ ညှိနှိုင်းဆဲဖြစ်ပြီး တန်ချိန်ပြည့် ဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး လုပ်ငန်းရှင်အသင်းက ပြောသည်။
စပါးဈေးကျဆင်းခြင်းမှာ လယ်မြေများ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ ဒေါ်လာဈေး ကျဆင်းလာ၍ ပြည်ပတင်ပို့မှု နည်းလာခြင်း
ကြောင့်ဖြစ်ပြီး တောင်သူများ နစ်နာမှုအား ပံ့ပိုးသည့်အနေဖြင့် အရန်ဆန်အဖြစ် ဝယ်ယူရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သြဂုတ်လအတွင်း နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် စီးပွားရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အရန်ဆန် ဝယ်ဖို့ကို ဒေသအလိုက်တာဝန်တွေ ပေးပြီးလုပ်ဖို့ပေါ့။ သို့သော် ဝယ်မယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီလောက် အများကြီး တခါတည်း မဝယ်နိုင်ပါဘူး။ အခုက ညှိနှိုင်းနေရတုန်းပါပဲ၊ တိုးတက်မှုမရသေးဘူး” ဟု ဆန်စပါး လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဒုဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်းလှိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အရန်ဆန်ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြားပြီး အာမခံဈေး သတ်မှန်ရနှင့် ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် မူဝါဒညှိနှိုင်းရန် ယခုတပတ်အတွင်း ဆန်စပါးလုပ်ငန်းရှင်များ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးပွဲ ခေါ်ယူသွားရန် စီစဉ်ထားသည်။
သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းကလည်း ဆန်စပါးအထူးပြုကုမ္ဗဏီများက စပါးတင်းတရာလျှင် ကျပ်လေးသိန်းဖြင့် အာမခံ
ပေးကာ ဝယ်ယူမှုများ စတင်ခဲ့သေးသည်။ သို့သော် ဝယ်ယူမှုမှာ ကုမ္ဗဏီမှ မျိုးစပါးနှင့် နည်းပညာ ရယူစိုက်ပျိုး သည့် တောင်သူများအတွက်သာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
“အထူးပြုကုမ္မဏီတွေက တောင်သူတွေကို အာမခံထားတာရှိပါတယ်။ လေးသိန်းနဲ့ ဝယ်ဖို့လေ။ အဲဒီမှာ ခြွင်းချက်
တော့ ရှိတာပေါ့။ သူတို့ပေးတဲ့မျိုးကို စပါးမျိုးကိုစိုက်ပြီးတော့ သူတို့ပေးတဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ အကူအညီနဲ့ စိုက်တဲ့ စပါး ဆိုရင်ပေါ့” ဟု ဦးစိန်ဝင်းလှိုင်က ဆိုသည်။
ပြည်ပဆန်တင်ပို့မှုလည်း ယခုနှစ်အတွင်း သိသာစွာ ကျဆင်းလျက်ရှိပြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်က တန်ချိန် ရှစ်သိန်းခန့် ရှိခဲ့
သော်လည်း ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ တန်ချိန် သုံးသိန်းခွဲသာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သေးသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပြည်ပဝယ်လက် နည်းပါးမှုကြောင့် တောင်သူများ တွက်ခြေကိုက်စေမည့် အာမခံဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ရေး မှာ အခက်တွေ့နေသည်ဟု ဆန်စပါးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ပြည်ပတင်ပို့မှုနည်းခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းတွင်လည်း တောက်လျောက်ဆိုသလို စပါးဈေး ကျဆင်း လျက်ရှိရာ စပါးပေါ်ဦးစတွင် ဧရာဝတီနှင့် ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ဧည့်မထမှာ ကျပ် နှစ်သန်းရှစ်သောင်းနှင့် ဆင်းသွယ် လက်စပါးမှာ သုံးသိန်းနှစ်သောင်းသာ ပေါက်ဈေးရှိသည်။ ယင်းဈေးနှုန်းသည် ယခင်နှစ်ကထက် ကျပ်ငါးသောင်း ခန့် လျော့နည်းသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ တနှစ်လျှင် ဆန်တန်ချိန် ၁၇ သန်း ထွက်ရှိသော်လည်း ယခုနှစ်တွင် မိုးဖျက်၍ စပါးအဓိက စိုက်ပျိုး သည့် ဧရာဝတီနှင့် ပဲခူးတိုင်းအပါအဝင် မွန်၊ ကရင်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် စပါးခင်းများ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
By featured, ဧရာဝတီ on November 16, 2011 6:56 pm
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေ၏ မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဥရောပသံရုံးတခုက ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးသဖြင့် ဥရောပသို့ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ထွက်ခွာသွားသည်ဟု စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သော နေရွှေသွေးအောင်၏ ၁၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဧည့်ခံပွဲတွင် တွေ့ရသော အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ နေရွှေသွေးအောင် နှင့် လုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်ဇော်
ဦးသန်းရွှေ၏ မိသားစုဝင်များအပါအ၀င် ယခင် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သူများ၊ ၎င်းတို့နှင့် အချိတ်အဆက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကို အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်သော်လည်း နေရွှေသွေးအောင် ရရှိထားသော ဗီဇာသည် ရှန်ကန်းဗီဇာ (Schengen Visa) ခေါ် ဥရောပနိုင်ငံအများအပြားကို သွားရောက်နိုင်သည့် ဗီဇာဖြစ်သည်ဟု ဧရာဝတီ၏ ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းရင်းမြစ်တခုထံမှ သိရသည်။
“မည်သူမည်ဝါကို ဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ ကျမတို့ ထုတ်ဖော် ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ ဗီဇာပိတ်ပင်မှုစာရင်းမှာ ပါနေတဲ့သူတွေကိုလည်း ဗီဇာထုတ်ပေးလေ့မရှိပါဘူး” ဟု ပြင်သစ်သံရုံး၊ ဗီဇာဌာန အရာရှိတဦးက ဧရာဝတီကို ယနေ့ ပြောကြားသည်။
ဧရာဝတီ၏ ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းရင်းမြစ်တခု၏ အဆိုအရ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှတဆင့် ဥရောပသို့ သွားရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ရရှိသော သတင်းများအရ နေရွှေသွေးအောင်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအများပြားကို အဘိုးဖြစ်သူ၏ သြဇာသုံးပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
နေရွှေသွေးအောင်က အဘိုး၏ အရှိန်အ၀ါကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သာ အသုံးပြုခြင်း မဟုတ်ပေ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကလည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုဝင်များ၏ “7 Lekker” ကော်ဖီဆိုင်ကို ၎င်း ၏ နောက်လိုက်များ စေလွှတ်၍ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟူသော သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဦးသန်းရွှေ၏ အချစ်ဆုံးမြေးတဦးဖြစ်သည်ဟု ထင်ရှားသည့် နေရွှေသွေးအောင်သည် ဒေါက်တာ နေစိုးမောင် နှင့် ဒေါ်ကြည်ကြည်ရွှေ တို့၏သား ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် ဆန္ဒပြ သတင်းများ ဆင်ဆာထိ
By featured, ဧရာဝတီ on November 16, 2011 12:36 pm
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသတင်းကို စာပေစိစစ်ရေးက အကန့်အသတ်ဖြင့် ဖော်ပြခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော မန္တလေးသံဃာဆန္ဒပြပွဲ သတင်းကိုလည်း ပိတ်ပင်ကြောင်း ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဓိက ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုက်ရိုက် ပြောစကား တွေကို ဖြုတ်တာ”ဟု သတင်းဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ တဦးက ပြောဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရုံးချုပ်၌ ကျင်းပသည့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခြင်း တနှစ်ပြည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော“တရား ဥပဒေ စိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဆိုတာမရှိဘူး” ၊ “အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်ဖို့ထက် ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀တွေတိုးတက်သာယာ ဖို့အရေးကြီးတယ်” “အခုတရားရေး မဏ္ဍိုင်က သန့်ရှင်းလွတ်လပ်မှု မရှိဘူးဆိုတာ အားလုံး သိတဲ့ အတိုင်း” ဟူသည့် စကားများကို စိစစ်ရေးက ဖြုတ် ပယ် ခြင်းဖြစ်သည် ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားတွင် ယမန်နေ့က သံဃာတော် ၅ပါး ဆန္ဒပြသည့်သတင်းနှင့် ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ ဦးဆောင် သော ရန်ကုန်မြို့ အိုးအိမ် ဦးစီးဌာနရှေ့တွင် အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းက လယ်သမားများ ဆန္ဒပြသည့် သတင်းများကိုလည်း စိစစ်ရေးက ဂျာနယ်များတွင် ဖော်ပြခွင့်မပေးကြောင်း သတင်းထောက်များက ပြောသည်။
“ဂျာနယ်နောက်ဆက်တွဲအချပ်ပိုအနေနဲ့ မန္တလေးမှာ သံဃာတော် ၅ ပါး ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကို ခွင့်ပြု၊ မပြု စာပေစိစစ်ရေးကို မေး တယ်။ ခွင့်မပြုဘူး။ အရင်တုန်းကလည်း ကိုဖိုးဖြူနဲ့ လယ်သမားတွေ ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းလည်း စာပေစိစစ်ရေးက ဖြုတ်ပယ်ခဲ့ တယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ သတင်းထောက်တဦးက ပြောဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်း ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်တွင် ရေးသည့် ခရီးသွားဆောင်းပါးအမှတ် ၃ တွင် NLD ဥပဒေ အထောက် အကူပြုအဖွဲ့အကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသားထားသည့် အတွက် စာပေစိစစ်ရေးက ဖော်ပြခွင့်မပြုဘဲ ပိတ်ပင်ခံရသောကြောင့် ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးများ ဆက်လက်ရေးသားရန်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
စီးပွားရေးဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့်ဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော ဂျာနယ်များတွင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဆက်စပ်နေသော နိုင်ငံရေးသတင်းများကို စိစစ်ရေးက ဖော်ပြခွင့်မပြုကြောင်း စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
“စီးပွားရေးဂျာနယ်ကတ်နဲ့ထုတ်တဲ့ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ စီးပွားရေးသတင်းပဲအကျုံးဝင်တယ် ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးသတင်းတွေအဖြုတ် ခံရတယ်။ စာပေစိစစ်ရေးကို မနာခံဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီ သတင်းတွေထည့်ရင်လည်း ခေါ်သတိပေး တယ်။ နောက်ဆက်တွဲ တင်ပြခွင့် ပိတ်ပင်တာမျိုး အရေးယူခံရတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းခေါ်ယူမည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် သတင်းမီဒီယာဥပဒေကို ရေးဆွဲတင်ပြအတည်ပြုပြီး ပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ ထုတ်ဝေခွင့်ပြုကာ စိစစ်ရေး၏အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ချမည်ဟု စာပေစိစစ်ရေးဌာန ၀န် ထမ်း တဦးက ပြောဆိုသည်။
ပြည်တွင်းသတင်းထောက်များကမူ သတင်းမီဒီယာဥပဒေမှာ မီဒီယာသမားများ ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲခွင့်ရမည် မဟုတ်ဘဲ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့စသည်တို့က ရေးဆွဲကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် ရရှိရေး အလှမ်းဝေးနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
မန္တလေး မစိုးရိမ်ဟောင်းမှ မေတ္တာသုတ် သံပြိုင်ရွတ်ဆို...
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့​ ပြည်သူ​တွေအတွက...
ဦးဂမ္ဘီရ နှင့် အခြားနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတို့ကို သယ...